Xayeysiyeyaashu waxay kordhiyeen kharashka wax iibsiga ee Google 32%, Amazon Product Sponsored by 50% YoY maalmaha fasaxa internetka | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Xayeysiyeyaashu waxay kordhiyeen kharashka wax iibsiga ee Google 32%, Alaabada Maalgelinta Amazon 50% YoY usbuucan fasaxa internetka
Xayeysiyeyaashu waxay kordhiyeen kharashka wax iibsiga ee Google 32%, Alaabada Maalgelinta Amazon 50% YoY usbuucan fasaxa internetka
Fasaxa miisaaniyada PPC ayaa sii wada kor u kaca. Xayeysiyeyaashu waxay ku kharash gareeyeen 32% wax ka badan xayeysiisyada wax iibsiga ee Google iyo 50% in ka badan oo ah Xayeysiiska Badeecadaha Amazon ee inta u dhaxaysa Thanksgiving iyo Cyber ​​​​Isniinti sanadkan marka loo eego kii hore, marka loo eego falanqaynta macaamiisha tafaariiqda ee Tinuiti ee ay wakaaladdu sii daysay Isniintii.
Kharash Google, guji La yaab ma leh, Kharashka wax iibsiga ayaa kordhay heer ka sarreeya xayaysiisyada qoraalka, laakiin xayaysiiyayaasha ganacsigu waxay wali ku bixiyeen 25% wax ka badan xayeysiisyada qoraalka usbuucan cyber-ka marka loo eego kobaca macmiilka ee sannadkii hore.
Kharashkaas dheeraadka ah waxa uu keenay korodhka isbarbardhigga dhagsiimada xayaysiisyada maadaama guud ahaan CPC-yada aysan soo kicin. Dhagsiimada qoraalka ayaa kor u kacay 25% iyo gujisyada wax iibsiga ayaa kor u kacay 31%. CPC-yada xayaysiisyada qoraalka ayaa ah kuwo siman marka la barbar dhigo sanad ka hor waxayna ku kordheen kaliya 1% xayaysiisyada wax iibsiga. Jebinta CPC-yada miiska, si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray koror dhan 18% wax iibsiga iyo 11% xayeysiisyada qoraalka ah. Xayeysiiska qoraalka taleefanka CPC-yada ayaa runtii hoos u dhacay 6%.
Amazon ee Google Shopping. Korodhka kharashka Google Shopping wuxuu ku yimid xitaa tartan weyn oo Amazon, kaas oo si weyn kor ugu qaaday muuqaalkiisa Google Shopping. Tinuiti waxay ogaatay in saamiga Amazon ee Google Shopping ay 87% ka sarreyso jimcihii Madoow marka loo eego sanad ka hor.
Badeecadaha Amazon Kafilan, Noocyada La Kafilo.
Iyadoo maalgashiga Xayeysiiska Badeecada ee Amazon uu kor u kacay 50%, gujisyada ayaa kor u kacay kaliya 29% iyadoo CPC-yadu ay kor u kaceen 16% marka loo eego sanad ka hor.
Waxay ahayd sheeko ka duwan noocyada Brands-ka ee la kafaalo qaaday (xayaysiimaha hore ee cinwaanka). Kharashka xayeysiiska ee qaabka ayaa kor u kacay 26% halka gujisyadu ay kor u qaadeen 52% CPC-yada kuwaas oo 17% ka jabnaa sannadkii hore.
Tinuiti ayaa soo warisay in Noocyada La Kafilo ay ku xisaabtameen 15% kharashaadka ugu badan ee Alaabaha la Kafilo ee xayeysiistaha dhexdhexaadka ah ee lagu beegsanayo labada qaab.
Saamaynta iibka Raadinta daaqad beddelka 24-saac ah, iibka loo aaneeyey Alaabooyinka la kafaala qaaday ayaa kordhay 31& sannad ka badan muddada shanta maalmood ah.
Noocyada la kafaala qaaday waxay leeyihiin daaqad beddelasho 14 maalmood ah. Iibka la sheegay ayaa kor u kacay 54% marka la barbar dhigo dhammaan daaqadda 14-maalmood ee sannadkii hore. Tinuiti waxa ay rajaynaysaa in boqolkiiba ay korodho marka ay xogtu soo korodho, laakiin waxa ay xustay in inta badan xayaysiiyayaasha iibkooda loo aaneeyay ay ku dhacaan 24 saacadood gudahooda marka xayeysiisku gujiyo.
Sababta aan u danayno. Tinuiti ma daaha ka qaadin xogta beddelka ee ololayaasha raadinta Google, laakiin inkasta oo qaan-gaarnimada Google Ads, xayaysiiyayaasha tafaariiqda ay wadeen inay arkaan kor u kaca mugga ee usbuuca fasaxa. Iyadoo Amazon ay si cad u soo galayso raadinta alaabta, guud ahaan mugga korodhka - iyo waxqabadka Amazon ee Google Shopping - ayaa hoosta ka xariiqay in raadinta weli ay tahay kanaalka muhiimka ah ee suuq-geynta tafaariiqda.
Xayeysiisyada Amazon waxaa loogu talagalay inay ku kaxeeyaan iibka loo aaneyn karo goobta. Si gacan looga geysto muujinta saameynta xayeysiisyada Brand-ka la kafaala qaaday ee iibka kordhinta, Amazon waxay soo bandhigtay cabbirro-calaamad cusub bishii Jannaayo si ay u muujiso macaamiisha aan wax ka iibsan astaanta Amazon 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Xayeysiyeyaasha Tinuiti, 70% beddelka iyo 71% iibka loo aaneeyey xayeysiisyadaas muddada shanta maalmood ah waxay ahaayeen macaamiil cusub.
9 Sababood oo aan waligaa loo dooran WordPress Hosting
7-da sare ee Form Builder Plugins ee WordPress